DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET M1005 MFP - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2020
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịtugharị egwu sitere na kọmpụta ahụ gaa na iPhone, ị nweghị ike ime ma ọ bụrụ na enweghị usoro iTunes nke arụnyere na kọmputa ahụ. Eziokwu bụ na ọ bụ naanị site na mgbasa ozi a jikọtara, ị nwere ike ijikwa ngwaọrụ Apple na kọmputa gị, gụnyere ịdegharị egwu na ngwaọrụ gị.
Iji budata egwu na iPhone site na iTunes, ị ga-achọ kọmputa na iTunes arụnyere, eriri USB, yana ngwa Ngwa Apple.
Kedu esi budata egwu na iPhone site na iTunes?
1. Mwepụta iTunes. Ọ bụrụ na inweghị egwu na mmemme ahụ n'onwe ya, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ tinye egwu site na kọmputa gị na iTunes.
2. Jikọọ iPhone gị na kọmputa ma chere ka ngwaọrụ ahụ mara gị. Pịa na akara ngosi nke ngwaọrụ gị na mpaghara elu nke window iTunes iji mepee menu nlekọta ngwaọrụ.
3. Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Egwú"na nyochaa nri ahụ "Mekọrịta egwu".
4. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ dị na mbụ nwere music, usoro ahụ ga - ajụ ma ị ga - ewepu ya, n'ihi na Mmekọrịta nke egwu ga-ekwe omume naanị n'ọbá akwụkwọ iTunes. Kwekọrịta na ịdọ aka ná ntị site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Ihichapụ ma mekọrịta".
5. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ụzọ abụọ: iji mepụta egwu niile site na okwukwo ogugu iTunes, ma ọ bụ iji dee listi ọkpụkpọ ọ bụla.
Mekọrịta egwu niile
Debe ihe dị nso "All Library Library"wee pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Chere maka usoro mmekọrịta iji mezue.
Mekọrịta listi ọkpụkpọ ọ bụla
Mbụ, okwu ole na ole banyere ihe listi egwu ọ bụ na otu esi eme ya.
Ndepụta ọkpụkpọ a bụ akụkụ iTunes dị oke egwu nke na-enye gị ohere ịmepụta egwu egwu dị iche iche. Ị nwere ike ịmepụta na nọmba iTunes na ọnụọgụ ọtụtụ egwu ọkpụkpọ maka oge dị iche iche: egwu na ụzọ arụ ọrụ, maka egwuregwu, nkume, ịgba egwu, egwu egwu, egwu maka onye òtù ọ bụla (ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ngwa Apple na ezinụlọ), wdg.
Iji mepụta listi ọkpụkpọ na iTunes, pịa bọtịnụ "Back" na nri aka nri nke iTunes ka ịpụ apụ menu nke iPhone gị.
Na mpịakọta elu nke window iTunes, mepee taabụ ahụ. "Egwú", na n'aka ekpe gaa mpaghara chọrọ, dịka ọmụmaatụ, "Egwú"imeghe ndepụta egwu niile agbakwunyere iTunes.
Na-ejide igodo Ctrl, malite ịpị na òké gị iji họrọ egwu ndị ga-emesị tinye na listi egwu. Na-esote, pịa egwu ndị a họọrọ ya na bọtịnụ òké aka na ntanetị a gosipụtara, gaa "Tinye na listi egwu" - "Mepụta ndepụta ọkpụkpọ ọhụrụ".
A na-egosi listi ọkpụkpọ gị aha na ihuenyo. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịnyagharịa ndepụta listi ọkpụkpọ, a na-agba ha ume ịtọ aha aha.
Iji mee nke a, pịa aha listi ọkpụkpọ ahụ ozugbo na bọtịnụ òké, mgbe nke a gasịrị, a ga-akpali gị ịbanye aha ọhụrụ. Ozugbo ị mechara ntinye, pịa bọtịnụ Tinye.
Ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu na usoro maka ịdegharị ndepụta egwu gị na iPhone. Iji mee nke a, pịa akara ngosi iPhone n'elu pane iTunes.
Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Egwú"lelee igbe "Mekọrịta egwu" ma lee igbe ahụ "Nhọrọ listi ọkpụkpọ, ndị ọkpụkpọ, albums na ụdị".
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke listi ọkpụkpọ, n'etiti nke ịchọrọ ịtọọ ndị ga-edegharị na iPhone. Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye"iji mekọrịta music na iphone via iTyuns.
Chere ruo mgbe njedebe nke mmekọrịta.
Na mbụ, o nwere ike ịdị ka ịkpụgharị egwu na iPhone bụ usoro mgbagwoju anya. N'ezie, usoro a na-enye gị ohere ịhazi ọbá akwụkwọ iTunes gị nke ọma, yana egwu ga-aga na ngwaọrụ gị.